Uhlolo lwe-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)
/Blog/Ithala/Uhlolo lwe-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)
ezaposwa ngomhla 01 / 08 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
1. Yintoni i-Oxymetholone (Anadrol)?
2. Oxymetholone (Anadrol) indlela yokusebenza
3. I-Oxymetholone isetyenziselwa ntoni ekwakheni umzimba?
4. I-Oxymetholone (Anadrol) umthamo
5. Umjikelo we-Oxymetholone (Anadrol) kunye ne-stack
6. I-Oxymetholone (Anadrol) imiphumo emibi
7. Ngaba i-Oxymetholone (i-Anadrol) ikhuselekile ukuyithatha?
9. Ngaba i-Oxymetholone (Anadrol) ayikho mthethweni?
10. Ndingayifumana phi i-Oxymetholone (Anadrol)?
Akumangalisi ukuba ukwakhiwa komzimba kungenye yezinto ezinzima kunokuba umntu angazibandakanya. Nangona kunjalo, ukuba kwenziwe ngokuchanekileyo ngemveliso elungileyo, uqeqesho kunye nokutya, umvuzo omnye kwiindawo ezibini. Enyanisweni, ukuphakamisa izisindo kunye nokuqeqeshwa yedwa kunokuthi akunikezi ziphumo zakho ezintle zidla ukucinga. Oxymetholone (Anadrol) enye yeemveliso ongazisebenzisayo ukuguqula uhambo lwakho lokwakha umzimba okwenza ukuba luncedo oluhle kunayo yonke ebomini bakho.
Enye into kukuba njengoko uneminyaka yobudala, ukuveliswa kwamahomoni omzimba njengeTesttosterone kuyancipha kwaye ushiywe kuphela ukhetho lokuxhomekeka kwinguqulelo yokwenziwa kwayo.Imisebenzi yeAnadrol njengeTesttosterone emzimbeni kwaye amathuba kukuba iya kuzisa izibonelelo ezingaphezulu kunale yokugqibela. Ayizukukwenza ukuba ubone inkqubela phambili emzimbeni wakho kodwa okona kubaluleke kakhulu iya kukwenza woyise nasiphi na isitheko somzimba esinokuba ngumceli mngeni kolu hambo.
Ukuba ucinga ngokuphila ngendlela emangalisayo yokwakha umzimba, ngoko kufuneka uthabathe u-Anadrol kuba kuya kukunceda kakhulu ukuba ukwandise ubukhulu bemisipha kunye namandla akho. Okwangoku ungafuna ukwazi kabanzi ngo-Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Uya kufumana lonke ulwazi malunga nalo ngomzuzu.
Yintoni i-Oxymetholone (Anadrol)?
I-Oxymetholone yigama le-brand ye-Anadrol 50 eyaziwa kakhulu nge-anabolic androgenic steroid. Ukuzibuza oko "i-50" ithetha ntoni? Ibonisa ii-milligram ezile ndawo i-steroid. Nazi ezinye zeempawu zamagama e-Anadrol;
Kwii-1960 ezinye iinkampani zonyango ziphuhlise iAnadrol. Ezi nkampani ziquka iZoltan, Syntex, kunye nePark Davis. Kwixesha elidlulileyo, lisetyenziswe ekuphuculeni imveliso yeeseli ezibomvu zegazi kubantu abaphethwe yi-anemia. Kwakusetyenziselwa ukwandisa ukutya, kunceda ekuqiniseni amathambo nokulwa nemisipha yokuchitha izifo. Uphononongo olwenziwe ngaloo mihla kwizigulane ezine-AIDS iintsuku ezingamashumi amathathu kwaye izidumbu zazo ezidlulayo kwiimfucuza zamathambo zibonise ukuba le steroid yabancedisa ukuba bafumane i-kilogramgram esibhozo ekupheleni kwexesha lokufunda.
Kwaye emva koko abantu baqonda ukuba ingasetyenziselwa iinjongo zokwakha umzimba. Abakhi bobuqili baqala ukuyisebenzisa ukufezekisa ubunzima obukhulu bemisipha. Namhlanje i-Oxymetholone (iAnadrol) (CAS 434-07-1) kuthathwa njengenye ye-anabolic steroids yomlomo onamandla kakhulu. Akumangalisi ukuba inokunceda umntu ukwakha imisipha emibini ngokukhawuleza njengoko ezinye i-steroids zinako. I-anabolic yayo kwi-androgenic ratio yi-350: 55. Nabani na umenzi womzimba owusebenziseyo unokufakazela ukuba le steroid iphezulu kwaye i-androgenic kunezinto ezikuzo manani.
Enye into eyenza i-steroid eqhelekileyo phakathi kwabantu abaninzi kukuba inokuthi ithathwe ngomlomo. Kungenxa yokuba i-17aa steroid ithetha ukuba ihlelwe ngokutsha kwi-17 yayoth i-athomu apha ingathathwa ngomlomo.
I-Oxymetholone yi-anabolic steroid esebenzayo kakhulu enefuthe elinamandla ukuba le chiza liqikelelwe ukuba linamandla kathathu kune testosterone. Yintoni enye onokuyifuna ukuba i-anabolic steroid?
I-Oxymetholone yi-synttotic testosterone ephuma kwi-anabolic ephezulu kwi-androgenic. Isebenza ngokubopha nge-cytoplasmic receptors kwi-tissue kunye nezitho ezingenayo i-androgen eziphendulayo ukwenza i-hormone-receptor complex. I-hormone-receptor complex then binds with DNA ngokunjalo ukukhuthaza ukubhalwa kwe-DNA kunye nokubunjwa kwe-mRNA eguqula ukusetyenziswa kweprotheni.
Ukongeza, i-Oxymetholone isebenza isiphumo se-anabolic kwiimisipha zamathambo kunye namathambo ngelixa ikhawulezisa i-erythropoiesis. Kwakhona, eli chiza linento yokwenza namayeza emzimbeni ngokwenyusa amanqanaba e-erythropoietin enceda ukuvelisa iiseli ezibomvu zegazi. Ikwonyusa ukulinganisela kwe-nitrogen emzimbeni kunye nokukhuthaza ukugcinwa kwamanzi.
Yintoni i-Oxymetholone esetyenziselwa ukwakha umzimba?
Oxymetholone inezinzuzo ezininzi zokwakha umzimba ezizisa kwitafile. Nazi ezinye zazo;
Iphucula iprotheni synthesis- Ukukhula kwemisipha kubangelwa yimveliso yamaprotheni ekubeni isona sakhiwo esikhulu kwisisipha somzimba. Emva kokuba usebenza, kukho ukuphazamiseka kwamaprotheni okuphazamisa ukukhula kwemisipha. Ukuze ubukhulu bemisipha yakho yanda, umzimba kufuneka ube neprotein yeprotein ngaphezu kokuphazamiseka kwawo, kunye no-Oxymetholone ukukhuthaza ukuvelisa amaprotheni, kukho ukudala izihlunu ezinkulu.
Ikhuthaza ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegaziIiseli ezibomvu zegazi ziqinisekisa ukuba izihlunu zakho zinomoya ophefumlelweyo ngenxa yoko oku kugcina ukudinwa kubekhona. Uyakwazi ke ngoko ukwenza ukusebenza okungcono ngaphandle kokufumana ukudinwa okugqithisileyo, oko ke kubangele izihlunu ezingcono. Isibonelelo somakhi womzimba sonyamezelo olongezelelekileyo kuba angakwazi ukuziqeqesha nzima iveki yonke.
I-Anadrol ikhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen- Le steroid inokunyusa inani le-nitrogen enokuzigcina izihlunu zakho. Inzuzo kunye nale nto kukuba izondlo ezininzi ziya kufakwa kwiimisipha zakho ezikhokelela ekukhuleni nasekuphuleni okungcono emva kokusebenza.
Igcina izihlunu ngexesha lisika- Akukho mntu ufuna ukuphulukana nezihlunu abazisebenzeleyo ngexesha lesigaba sokusika. Into eyenziwa nguAnadrol kukuba iyahlasela kwaye itshabalalise iiseli zomzimba ngaphandle kokutshabalalisa izihlunu. Nje ukuba amafutha ajikeleze izihlunu aqhekekile izihlunu ngoku ziya kujongeka zisikiwe kwaye zixhomekeke Ukujonga okunzima kunye nokuqina Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1.
Ikhuthaza ukondla-Umcwangcisi womzimba kufuneka athathe ezininzi iikhalori ukuze umzimba ukwazi ukuzakhela imisipha. Kodwa ingxaki ifumaneka xa umntu ehlupheka ngenxa yokungabi nqweno lokuthatha iikhalori ezifunekayo. I-Oxymetholone izokunika ukutya okwaneleyo okuza kuphucula iikhalori zakho.
Ukwandisa umda wamandla- U-Anadrol uya kukwandisa amandla akho, inzuzo eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-weightlifters.
Ngokuphawulekayo kukhokelela ekunyuseni kwamandla omzimba- I-Oxymetholone iphucula amandla kwaye ukuba ufuna into eyakunceda ukuba uqhube ngaphezulu kunye neepaliti ngokuphinda ucacise ngokungakumbi nakwiindlela ezifanelekileyo. Ukuhamba ngokuphononongwa kwayo, eli chiza libikwa ukuba lenze amandla angqongqo ekusebenziseni kwayo.
Ngokukhawuleza kukhuthaza ukukhula kwemisipha- Abakhi bomzimba abaninzi bazamile ukufumana izihlunu ngaphandle kwento. Kunye Oxymetholone, akudingeki uzame kakhulu. Xa uqala ukuphuma ezi pilisi, unokulindela ukufumana izihlunu zingaphantsi kweenyanga ezimbini. Inxalenye ephambili yokusebenzisa le nkunkuma kukuba akudingeki ukuba ulinde ixesha elide ukuqala ukuqaphela ukuba imisipha yakho ikhula. Ngeveki yesibini, uya kukwazi ukubona umehluko.
Yenza ngokukhawuleza ngokusebenza ngokukhawuleza iziphumo-Ukuba awukulungelanga ukuba nomonde, uyakuyiqonda into yokuba le steroid inika iziphumo ezigqibeleleyo ngexesha elifutshane. Iya kukrola ungumzimba wakho ekuvumela ukuba ufeze iinjongo zomzimba wakho kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezisibhozo.
Ukuphucula ukusebenza-Ngaphandle kokwakha izisipha, u-Anadrol unikeza umntu amandla amakhulu ekusebenzeni. Ngenxa yoko, izixhobo zomzimba kunye nabagijimi bangaphumelela ngokukhawuleza kwiiseshoni zoqeqesho. Ngenxa yoko, banokuqeqesha nzima nakwixesha elininzi.
Unceda ekuzuzeni ubunzima-Ukuba ufuna ukwenza umzimba wakho ubonakale ugcwele kwaye unomdla ngakumbi kuya kufuneka uqwalasele ukusebenzisa I-Oxymetholone yokufumana ubunzima. Abantu abaninzi abayisebenzisileyo baye baxela ukuba ibancede bafumana ubunzima ngokukhawuleza. Ukubeka iiponti ezingama-20-30 ngaphakathi kweeveki ezi-4-6 akukho ntloni, kwaye u-Anadrol uqinisekisile ukuhambisa nangaphezulu koko.
Ukwandisa umzila-Ukwazi ukumba ngaphakathi kuqeqesho lwakho okanye kwiiseshoni zoqeqesho ixesha elongezelelekileyo yinto elangazelelwa ngumakhi ngamnye womzimba. Isiphumo seOxymetholone kukuba iphakamisa amandla akho akuvumela ukuba uqeqeshe umzimba wakho okoko ufuna ukukhokelela kulwakhiwo olukhulu.
Ukwazisa iintlungu ezihlangeneyo-Ezi ntlungu zinokwenza ukuba umntu athiye ukusebenza kwaye nangona u-Anadrol esaziwa ukuba enze ubunzima bemisipha kunye namandla, ikwadlala indima ebalulekileyo ekunikezeleni amalungu ukuba azive ethanjisiwe ngaloo ndlela kunciphisa iintlungu ezidibeneyo. Awusayi kuba nasizathu sokungaphakamisi iintsimbi rhoqo njengoko uthanda.
Umlinganiselo we-Oxymetholone (Anadrol)
Ukuthatha nje i-Anadrol 50 akuqinisekisi ngeziphumo ezilungileyo. Kuya kufuneka uthathe idosi efanelekileyo ukuba ufuna ukufumana iziphumo ezilungileyo. Ngaphandle koko, ukuthatha idosi echanekileyo kukukhusela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nokuthatha okungalunganga Umlinganiselo weAnadrol. Nangona kunjalo, idosi yeAnadrol iyahluka ukusuka komnye ukuya komnye kuxhomekeke kwiinjongo zakho.
Ngokuchasene nezinye izongezo zedosi apho isixa osithathayo utshintsho kumanqanaba ohlukeneyo omjikelo, i-Anadrol inomthamo oqhelekileyo we-50mg mihla le. Abaqalayo bangaqala ngethamo eliphantsi njenge-25mg-50mg, kwaye ukuba imizimba yabo iyalinyamezela ichiza, ngoku banokwandisa ukutya.
Abantu abaninzi banqwenela ukudlula ngaphezulu kwesi sigidimi becinga ukuba kuya kwandisa ngakumbi ukutya kwabo. Nangona kunjalo, oku akunjalo na-Anadrol. Isebenza ngokuthe tye ngenxa yokuba inqanda isithandwa somntu esisodwa sithathwe ngokungaphezulu. Kwakhona, kunconywa ukuba umntu angathathi umlinganiselo ophezulu weli chiza kuba unokukhokelela kwimiphumo emibi.
Ukuba ufuna ukuhlawula ngaphezulu, unokwandisa umlinganiselo wakho kwi-100mgs. Kodwa ke kunikezelwa ukuba uyakwenza kuphela xa umzimba wakho unako ukunyamezela. Musa ukwenza iphutha lokugqithisa i-150mgs kuba oku akuyi kuba kuhle kwisibindi sakho. Kwakhona kunokukhokelela ekunciphiseni izifiso zakho, kwaye oku kuya kuthetha ukuba awukwazi ukutya njengokuba wawuqhele ukukhusela ukuphuhlisa kwakho.
Umjikelezo we-Oxymetholone (Anadrol) kunye ne-stack
Uninzi lwabakhi bomzimba bakhetha ukusetyenziswa kweAnadrol kwimijikelezo yabo ngenjongo yokuphucula ukusebenza kwabo. Nazi ezinye zeesekethe ezithandwa kakhulu ngabo;
Kuthatha iiveki ezilishumi elinambini.
Iveki 1 ukuya kwiveki 6- Thatha i-25-50mg ye-Anadrol yonke imihla
Iveki 1 kwiveki 12- Thatha i-300-500mg ye-Testosterone Inanthate ngeveki.
Le yenye yeendlela zokuqala ezinobuhlobo zeAnadrol apho iTesttosterone iyinxalenye yayo kunye nedosi ephezulu eya kuthi ivelise iziphumo ze-anabolic ezifunekayo. Kwelinye icala, u-Anadrol ukwidosi yesiqhelo ekucetyiswa ukuba ayithathe.
Ngelixa kulo mjikelo, kuyacetyiswa ukuba uthathe i-SERM efana ne-Nolvadex okanye nayiphi na i-aromatase inhibitor ngenxa yohlobo oluphezulu lwe-estrogenic enayo le stack. Nawuphi na umntu oqalayo ofuna ukukhupha, lo ngowona mjikelo weAnadrol ongcono kakhulu awuya kuwo.
2. Abasebenzisi abaphakathi
Iveki1 kwiveki 6- Thatha i-50mg ye-Anadrol imihla ngemihla.
Iveki1 ngeveki 12- Thatha i-400mg yeC deca Durabolin (iNandrolone Decanoate) ngeveki.
Kwakhona, thabatha i-100mg Testosterone Enanthate ngeveki.
Njengoko uqaphele, kukho iinguqu ezimbalwa kulo mjikelezo ngokuthelekiswa nomnye wokuqala. Lo mjikelo awuyiyona i-anabolic eyona nto, kwaye injongo ephambili yale nto kukunciphisa ukwanda komsebenzi we-estrogen kuwo wonke umjikelo ngelixa usebenzisa izidakamizwa ezifana ne-Anadrol.
I-Deca Durabolin iza kuluncedo kulo mjikelo xa umntu eyeka ukusetyenziswa kwe-Anadrol kuba sisixhobo se-anabolic. Kulo mjikelo we-Anadrol, idosi yayo incitshisiwe ukusuka ku-50-100 mg yonke imihla ukuthatha nje i-50 mg ngosuku. Kungenxa yokuba eli chiza line-anabolic kakhulu. Ngoko ke, ayifuni ukwanda kwe-Anadrol dosage. Ukufumana ubunzima okanye ukufumana amandla, idosi ye-50mg ingaphezulu komsebenzisi ophakathi.
3. Kubasebenzisi abakhulu
Kuthatha iiveki ezisibhozo.
Iveki 1to iveki 8- 100mg yeAnadrol ngosuku
Thatha i-25mg ye-Testosterone Propionate yonke imihla enye kwi-100mg ngeveki
Thatha i-100mg i-Trenbolone Acetate yonke imihla enye kwi-400mg ngeveki.
Ukwahluka kwesi sijikelezo esiphezulu kunye nabanye kukuba kuthatha ixesha elifutshane. Kwakhona kuquka ama-steroids anama-short esters afana ne-Trenbolone Acetate kunye ne-Testosterone Propionate. Ukusetyenziswa kwayo kugcinwe kwiiveki ezintandathu, kwaye akucebisi ukuba uyisebenzise ixesha elide ngakumbi ngenxa yokulinganisa kwe-100mg ngosuku.
Elona candelo lilungileyo malunga nomthamo ophezulu we-Anadrol kukuba iyakwazi ukubonelela ngamandla amakhulu kunye nokufumana inzuzo ingakumbi xa idityaniswe neTrenbolone Acetate.
Lo mjikelo ukhuthazwa kuphela kubasebenzisi abaphambili kuba kunokubangela ukuba umntu athathe amandla angaphezu kwamandla kunye nobukhulu becala ngokubangela ukulimala kwabanye abasebenzisi bezinga.
I-Anadrol 50 inikezela ngeendlela ezahlukeneyo njengoko unokukhetha ukuzisebenzisa ngokwakho okanye ukuyibeka kunye nezinye i-steroids.
Anadrol kuphela umjikelo- Ngalo mjikelo, unokufumana iziphumo ezintle. Nangona unako ukugqiba isigqibo, ukulungele ukukhetha i-steroids ubeka kuyo kunye nokuphepha ukunyusa iziphumo ezibi. Ukuba unomdla wokwenza izinto ngendlela ekhuselekileyo, nanka iindlela ongakwenza ngazo;
Sebenzisa i-anabolic elula-Ukuhle ukuba uyifake kunye ne-anabolic steroids emfutshane njengeSARMS, Equipoise, Primobolan, kunye neC deca Durabolin.
Musa ukuyibeka kunye ne-androgenic steroids kwiqondo eliphezulu kakhuluNgelixa uyigcina ngee-steroids ezinje ngeTesttosterone okanye iTrenbolone, kuya kufuneka uphephe ukuthatha idosi yeAnadrol edlula i200mg.
Gwema ukuyibeka kwi-derivatives ye-DHT- Ukuxaka iAnadrol kunye ne-steroids njengo-Masteron kunye noWinstrol baya kwenza okubi ngaphezu kokulungileyo. Unokufumana i-gains oyifunayo, kodwa iziphumo ezichaphazelekayo eziza nazo zingenakubekezeleka. Kwiimeko apho abantu babanjwe khona neWinstrol, bekukho iingxelo zokulahleka kweenwele ezinzima.
Gwema ukuyibeka kunye nezinye i-steroids ezenza ingozi kwisibindi-Gwema ukugxila nge-steroid yomlomo ngenxa yokuba kunokubangela iingxaki zesibindi njenge-jaundice.
Musa ukubeka ixesha elide-Ngexesha eliqhelekileyo lokubanjwa kweeveki ezine, kukulungile ukuba uqaphele ukuba ixesha elide lokusetyenziswa kunye nokuphakanyiswa kwimizamo oyithathayo, imiphumo emibi ibe nzima.
Kuya kufuneka ke uthathe i-Oxymetholone stack ngokufanelekileyo ngaphandle kokusebenzisa gwenxa iziyobisi.
Ngenxa yokuba i-Anadrol yenye ye-anabolic steroids eyomeleleyo kwintengiso, kulungile ukuba ube nonyango oluhle kakhulu lwasemva komjikelo olubekiweyo. Injongo yoku kukuvumela ukuba ugcine iinzuzo zakho. Akunakulunga ukuba uphulukane nayo yonke into oyizuzileyo emva komjikelo, akunjalo? Ukongeza, i-PCT ikunceda ukuba uphephe iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubangelwa kukucinezelwa kwemveliso yeTesttosterone.
Ekubeni i-Anadrol inobomi obuncinane kakhulu kwaye i-ester esifutshane, kufuneka uqale iPCT yakho iintsuku ezintathu emva kokuba uthathe idilesi yakho yokugqibela ukuba uyisebenzisa kuphela. Ukuba uthe wafaka i-stteroid nge-estero ende, kufuneka uqale iintsuku ze-PCT 14-18 emva kokuthatha idilesi yakho yokugqibela. I-Nolvadex okanye i-Clomid iya kunceda ukukhahlela kwakho imveliso yemvelo ye testosterone emzimbeni wakho. Nantsi indlela yokuthabatha iziyobisi;
Iiveki Nolvadex / ngosuku Clomid ngosuku
Iimpembelelo ze-Oxymetholone (Anadrol)
The Iziphumo zeAnadrol zilungile, kodwa ngamanye amaxesha zinokuza neziphumo ebezingalindelekanga ezingathandekiyo. Uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga ze-Anadrol ziyalawuleka kwaye ziya kudlula wakugqiba ukuzithatha.
Khangela ingqalelo ugqirha xa ufumana nayiphi na le miqondiso ngenxa yeempendulo ezithintekayo;
Ukuvuvukala komqala, ulwimi, imilomo kunye nobuso
Imiphumo emibi ye-Anadrol ebangelwa ukusetyenziswa kwayo kwexesha elide i-cysts egcwele igazi. Kwakhona kubangelwa izibilini zesibindi.
Biza ugqirha ukuba unayo na enye yezi zinto;
I-jaundice-i-yellowing yamehlo nesikhumba.
Ubuhlungu besisu esiswini
Ukuvuvuka kweenyawo nezandla
Utshintsho kumbala wesikhumba
Ukuvuvukala okubuhlungu kumabele
Ukuqhawula (ukuphuma kwegazi okanye ukuphuma kwempumlo) okanye ukululaza, ukuphuma ngaphandle kokuyeka
Umdla wokutshatyalaliswa kwezesondo, wehla inani lembewu eveliswa ngokukhawuleza, inkathazo yokuba ne-orgasm kunye nokungabi namandla
Uvakalelwa intlungu kwi-penis xa iphakame
Ukuqhaqha nzima okanye ubuhlungu
Abasetyhini abasebenzisa i-Oxymetholone banokuphuhlisa iimpawu zobudoda kwaye ke, bayeke ukusetyenziswa kwayo xa zenzekile okanye bafune ingcebiso kugqirha. Ziquka;
Umdla owenyukayo okanye owandayo kwisondo
Utshintsho kwixesha lokuhamba kwakhe
Ukwanda kweenwele zobuso
Ukukhula kweenwele kwisifuba
Izwi elijonge okanye elivakalayo
Imiphumo echaphazelekayo eyenzekayo kubini abesilisa nabesifazane zibandakanya;
Iingxaki zokulala (insomnia)
Ndiziva ndivuyisiwe okanye ndingahlali
Ukuvuvukala kwebele kunye nokunyameka (kumadoda kunye nabasetyhini)
Ngaba i-Oxymetholone (i-Anadrol) ikhuselekile ukuyithatha?
Ngaba u-Anadrol ukhuselekile? Lo mbuzo uhleli ezingqondweni zabantu abaninzi abanomdla wokuthatha eli chiza. I-Anadrol 50 ikhuselekile ukuba ithathwa ngokuchanekileyo, kodwa isenokungabi njalo xa unengxaki kwezi meko zilandelayo;
Ukuba ukhona nawaphi na izidakamizwa ezinxilisayo zegazi ezinjengeJantoven, iCoumadin, iWarfarin
Ukuhlamba okanye ukuphazamiseka kwegazi
I-cholesterol ephezulu okanye i-triglycerides
Isifo senhliziyo, ukungaphumeleli kwintliziyo ye-congestive
Isifo okanye isifo sesifo
Umhlaza wesifuba wesifuba kunye ne-calcium eninzi egazini
I-Anadrol ayikhuselekanga kuwe ukuba ukhulelwe. Inokubangela ingozi kusana lwakho olungekazalwa kwaye ikhokelele kwiziphene zokuzalwa. Ukuba unokukhulelwa ngelixa usebenzisa eli chiza, jonga ugqirha kwangoko. Uyacetyiswa ukuba usebenzise indlela esebenzayo yolawulo lokuzalwa ngelixa usebenzisa eli chiza.
Eli nyanga linga guqula ukuzala kubasetyhini kunye namadoda kwaye, ngoko ke, kufuneka kuthatyathwe ngononophelo oluninzi.
Uphando malunga nokuba luyadlulisela umntwana osondezayo ngobisi lwebele alukwenziwanga, kwaye awaziwa ukuba ingaba yintoni na ingozi. Ngelixa usebenzisa le mayeza unqanda ukunyamezela wakho umntwana.
Abantu abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo ubudala abanakuyisebenzisa le myeza kuba kunokuchaphazela ukuphuhliswa kwamathambo abo.
Thenga Anadrol kwi-site yethu kwaye sithunyelwe. Nantsi indlela oyalela ngayo kuthi;
Ungaqhagamshelana nathi nge-imeyile yethu, ummeli weenkonzo zamakhasimende, i-Skype kwi-Intanethi okanye nge-system yethu yophando ye-imeyile.
Ukuze sikwazi ukukukhonza kangcono, unikeze yonke inkcazelo ebalulekileyo malunga nomyalelo, okt, idilesi yakho kunye nobungakanani ofuna ukuyithenga.
Ummeli wethu weenkonzo zabathengi uya kubuya kuwe kwaye akunike iindlela zokuhambisa, umhla wokufika oqikelelwayo (i-ETA), inombolo yokulandelela, ukucaphuna kunye nemigaqo yentlawulo efanelekileyo kakhulu.
Xa uhlawule umyalelo wakho, iimpahla zithunyelwa kuwe kwiiyure ezilishumi elinambini ezilandelayo (Leyo nayiphi na umyalelo ongaphezu kweekhilogram ezilishumi).
Ngaba i-Oxymetholone (i-Anadrol) engekho mthethweni?
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukuthengisa kunye nokuthenga i-Oxymetholone kuyahluka ngokwamazwe. Umzekelo, e-UK, Canada nase-US ukusebenzisa eli chiza kuyavunyelwa, kodwa ukuthengisa ngokungekho mthethweni akuvumelekanga. Ukuthintela ukuzifumana usezingxakini, jonga ukuba ilizwe lakho livumele ukusetyenziswa kweAnadrol.
Kwamazwe amaninzi, ungayifumana kuphela kwimithi yokugada kodwa uphephe ukulahleka ungayifumana kwi-intanethi.
Ndingafumanaphi iOxymetholone (Anadrol)?
Njengoko uzibandakanya abanxibe impahla, unokufumanisa ukuba izinga lokukhula kwemisipha yakho alinelisekanga. Nangona emva kokukwenza konke okusemandleni akho, unokufumana uxhalabisayo ukuba uqaphele ukuba awufiki apho ufuna ukuba khona. Kwezinye izihlandlo, unokwazi ukuba kukho amaninzi amaninzi akhulayo emzimbeni wakho. Amafutha anjalo aya kufihla imisipha yakho, kwaye unokufumana ukhangele yonke into.
Xa kunjalo kwimeko enjalo, musa ukugxininiseka ukubuza ukuba yintoni elandelayo. Iintsuku xa kwakufuneka ucele wonke umntu kwi-gym ukuze ube nokwakha izithambo zakho sele zide. Namhlanje, ushwankathela kwi-intanethi, kwaye unokufumana zonke iindawo ezithengisa i-steroids kwi-intanethi. Kodwa uyayazi njani indawo efanelekileyo yokuthenga kuyo?
Njengayo nayiphi na i-steroid oyithengayo, kubalulekile ukuba uthenge i-Anadrol 50 kumthombo othembekileyo. Apho unokuqiniseka ukuba uza kufumana elona xabiso liphezulu le-Oxymetholone kunye nomgangatho. Xa i-intanethi inamaqhinga amaninzi egameni labathengisi, unokuwela kwiindawo ezithengisa ii-steroids ezingezizo okanye ezingcolileyo. Ezinye ii-anabolic steroids zisenokungabikho isiqinisekiso sobunyani, kwaye zinokuphela zichaphazela kakubi umzimba wakho. I-Oxymetholone yokwenyani ngaphambi nasemva kweziphumo zifana nehlabathi ezimbini ngaphandle, kwaye kufanele ukuba kube njalo xa uqala ukusebenzisa le steroid.
Kwindawo yethu AASraw.com, uya kuba nakho u-Anadrol ococekileyo nococekileyo. Ixabiso lethu le-oxymetholone li-pocket-friendly, kwaye ngokusemthethweni, uyaqinisekiswa ngokufumana iziphumo ezilungileyo ze-Anadrol kunye neziphumo ebezingalindelekanga ze-Anadrol. Myalelo ovela kuthi namhlanje kwaye utshintshe umzimba wakho ube yile nto ufuna ukuba yiyo.
USaartok T, uDahlberg E, uGustafsson JA (1984). "Ukudibana kwesihlobo se-anabolic-androgenic steroids: ukuthelekisa ukubopha kwi-androgen receptors kwimisipha yamathambo kunye nakwiprostate, kunye nakwi-globulin yesondo ebopha i-hormone". Endocrinology. 114(6): 2100-6.
IPavlatos AM, iFultz O, iMonberg MJ, iVootkur A, iFarmd (2001). "Ukuphononongwa kwe-oxymetholone: ​​i-17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid". Clin Ther. 23(6): 789-801.
UZderic, uJohn A .; UCarpio, uHumberto; URingold, HJ (Janyuwari 1959). “IiSteroids. I-CVI. Yindibanisela yee-7β-Methyl Hormone Analogs ”. Umbhalo we-American Chemical Society. 81(2): 432-436.
I-AASraw ngumenzi oqeqeshiweyo we-Oxymetholone powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho olandelwayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye ne-wholesale ziyamkeleka.Wamkelekile ukuba ufunde ulwazi olungakumbi malunga ne-AASraw!
Yonke Into Oyifunayo Ukuyazi Ngokwakheka Kwe-Dianabol Ukuthengiswa	I-Raw Proviron (iMesterolone) ekwakheni umzimba, umyinge, kunye nomjikelezo